Yehlabathi Lokuqala! Indawo yokuHlala ebhafini eKhuselekileyo neLuncedo, ukuze "uhlambe" kwindawo yakho
Ikhaya / Blog / Yehlabathi Lokuqala! Indawo yokuHlala ebhafini eKhuselekileyo neLuncedo, ukuze “Uzihlambe” kwindawo yakho
2021 / 04 / 22 uhleloBlog 4220 0
Izihloko zeNdawo yangasese yeNethiwekhi yangasese
"Ukuhlamba nokutshisa isiqhumiso, ukudlala ipiyano kunye nokonwabela i-chrysanthemum", abantu ngokuthe ngcembe baguquka bahlambe kwisithethe esibalulekileyo, esibonisa uthando lwethu nothando ngobomi. Ukuhlamba, njengokonwaba noxolo olukhulu lomhla wethu, akunakuphela kuphela ukudinwa kosuku, kodwa kunokuzisa amava okuhlamba imo eyahlukileyo, apho kuya kuvula usuku olutsha, kodwa kwalapha ukuze kuthi ndlela-ntle kwabaxakekileyo usuku.
Eyilwe ngenkathalo, ukhathalele wena nam, ukunika nje olona lonwabo luhle lokuhlamba
Ngokweengxelo, ngaphezulu kwe-20,000 XNUMX yokusweleka ngenxa yeengozi zasekhaya ezenzeka eFrance minyaka le, phakathi kwazo, ukusweleka kwabantu kubangelwa kukuwa ebhafini yokuhlambela, ukutshiswa ngamanzi ashushu okanye kukuntywila. Malunga ne-4,000 yabantu bayafa minyaka le ngenxa yokuwa ebhafini, elingaphezulu kwenani labantu ababhubha eFrance kwiingozi zendlela kunyaka wonke (3,259 ngo-2018).
Ezi ngozi, zisibangela ukuba sinikele ingqalelo enkulu ekufumaneni ibhafu efanelekileyo abadala, abakhubazekileyo, abagulayo, abasetyhini abakhulelweyo, abantwana, abantu abanemilenze ebuthathaka kunye nabanye abantu, ngakumbi abasebenzisi bezitulo ezinamavili ezilungiselelwe bona, uyayazi ukuba ikhona? Makhe ndikwazise isipho sokuhlamba eshushu nesikahle esabo - "ibhafu yokuhlala".
Le bhafu yeyokuqala emhlabeni “Ibhafu yokuhlambela” eyilwe nguMnu Li Wei, ingcali ephezulu yophando kunye nomyili kwishishini lezempilo, okhathalele ngakumbi amava ebhafini yomsebenzisi. Le bhafu yokuhlala ikhona eyenzelwe ngokukodwa abantu abadala, abakhubazekileyo, abagulayo, abasetyhini abakhulelweyo, abantwana, abantu abanemilenze ebuthathaka, ngakumbi abasebenzisi bezitulo ezinamavili.
Uyilo lomntu, yiva ukhululekile kwaye unendawo yokuhlamba efanelekileyo
Sonke siyazi ukuba igumbi lokuhlambela limanzi ixesha elide kwaye umhlaba uyatyibilika, ngakumbi xa singena siphuma kwibhafu egudileyo kwaye emtyibilizi, kulula kakhulu ukutyibilika uwa. Abantu abasempilweni kufuneka balumke ngaphakathi nangaphandle kwebhafu, kodwa kaninzi bahlala bengazinzanga.
Amagqabantshintshi ale bhafu ngamanqaku ama-2: okokuqala, uyilo olulula lwale bhafu yokuhlambela ivumela uyilo ukuba luvele kubulula. Elula iyafana nokulungeleyo, ungadibanisa ngokukhululekileyo nasiphi na isithuba, ukuze "uhlambe" ngesantya sakho.
Okwesibini, ukusebenza kwebhafu kulula, kukhuselekile kwaye kuyakhawuleza. Xa usebenzisa, isiphelo esinye sebhafu yokunyusa ibhafu edityaniswe nesihlalo sokufaka, kunye nokuxhoma etankini. Xa isihlalo sethu siphakamisiwe, isitya sokuhlala kunye nomphetho webhafu ngokulingana okufanayo, sinokutyibilika ngokulula esihlalweni kwaye siphakamise imilenze etankini. Xa sithoba isihlalo ukuya ezantsi etankini, sinako ukuhlamba, ukusefa kunye nokuthambisa ngesiqhelo.
Xa sigqibile ukuhlamba, sinokuphakamisa isihlalo siye esiphelweni sebhafu yokugungxula ngeplate yesitulo, sinokujika siphakamise imilenze ukuphuma kwitanki, ukuhlamba kuphelile.
Xa isihlalo sokuphakamisa siphezulu ngokulinganayo nomphetho webhafu, kufanelekile ukuba sihlale ngaphakathi nangaphandle kwebhafu, sihlala esihlalweni emva kokuba isihlalo sehlisiwe etankini. Ukuhlamba, ukuhlanganiswa kokuhlamba, ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo. Umsebenzi wokuphakamisa ulawulwa ngamaqhosha epaneli yokulawula ecaleni kwetanki, zombini zilula kwaye zilungele, kodwa ikwanendlela yoyilo engatyibilikiyo. Ukugcina yonke ibhafu kukukhetha kuqala kwebhafu yethu.
Icala lokuhlambela eludongeni, ungongeza iscreen seshawa yeglasi, unokuguqula igumbi lokuhlambela labantu abadala okanye abakhubazekileyo. Ngomsebenzi wokulwa nesiliphu kunye nokuchasana nokuwa, kukhuselekile kwaye kufanelekile ngakumbi kuthi ukuba uhlale ngaphakathi nangaphandle kweshawa. Kwangelo xesha, inokusetyenziswa njengendawo yokuhlambela iinyawo, ukuhlala ngaphakathi nangaphandle, ukubeka amanzi ukuphulula imilenze neenyawo.
Ukunyuka nokuwa kwesihlalo sokunyusa kulawulwa yiphaneli yokulawula efakwe kumda ophezulu weetanki, ezinokuthi zifane nezinye iipaneli zokulawula ezisebenzayo zebhafu. Ukongeza, ibhafu yokuhlalisa ngaphakathi inokushiya indawo ejonge ngasekunene nangasekunene ngokwendlela yokuhlambela.
Ngaphambili :: La magumbi okuhlambela nawo aXabiso liphezulu, Ngaba uwabonile onke? next: Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela i-16 "Iinkcukacha zikaThixo", Yenza into eyiyo, Unokwenza ukuba imisebenzi igcine isiqingatha